Indonesia - country context & study sites | SUNI-SEA Creating Synegies
Home / Sites / Indonesia
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ဂျာဗားကျွန်း၊ ဆူမတ်တြာ၊ ဆူလာဝေဆီ၊ ပါပူအာနှင့် ကလီမန်တန် ကဲ့သို့ အဓိကကျွန်းငါးခုနဲ့အတူ ကျွန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အရှေ့တောင်အာရှရှိ ကျွန်းစုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လူဉီးရေမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၂၆၁.၁ သန်းရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ဂျာဗားကျွန်းမှာ နိုင်ငံလူဉီးရေ စုစုပေါင်း ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လူဉီးရေအထူထပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကူးစက်ရောဂါများက သိသာထင်ရှားသည့် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေသေးစဉ်တွင် မကူးစက်ရောဂါများကြီးထွားလာမှုက ပိုအရေးကြီးလာသည့် ရောဂါအသွင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် သေဆုံးမှုများ၏ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ မကူးစက်ရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကြောင့် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ၊ကင်ဆာရောဂါများကြောင့် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ၊ နာတာရှည်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကြောင့် ၆ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ၆ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ကျန် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အခြားသောမကူးစက်ရောဂါများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်စေသည့် ယေဘုယျအကြောင်းအရင်းများမှာ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောများခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်မှုမှာ အရွယ်ရောက်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်တွင်တွေ့ရပြီး အမျိုးသမီး ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသား ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိကြသည်။
ကြီးထွားလာသည့် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါပြဿနာကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတွင်း မကူးစက်နိုင်သောရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဉီးဆောင်စီမံရန်အတွက် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများဉီးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါအစီအစဉ်များသည် အများအားဖြင့် တားဆီးကာကွယ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများဖြစ်ပြီး အသိပညာပေးရန်အတွက် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ပေးခြင်း ၊ ရပ်ရွာအခြေပြု ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းသာမက စောစီးစွာရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် နိုင်ငံများကြားတွင် ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုအမြင့်မားဆုံး( ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးကြ)နိုင်ငံတစ်ခုထဲတွင် ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စီးကရက်များကို အခွန်မြင့်မားစွာကောက်ခံခြင်း၊ ဆေးလိပ်ကင်းစင်ရေး အများပြည်သူနေရာများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ကြော်ငြာများကို စည်းကမ်းတင်းကြပ်ခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များကို အထူးထုတ်ပိုးစေခြင်းနှင့် အထူးတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်စေခြင်းစသည် မူဝါဒပေါင်းများစွာကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် အမျိုးသားလူမှုကျန်းမာရေးအာမခံ(BPJS Health) သည် ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါအမျိုးစား -၂ ၊ သွေးတိုးရောဂါ ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းများကို အစီစဉ်တွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဖြည့်စွက်အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှစ၍ BPJS Health သည် အင်ဒိုနီးရှားကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ စောစီးစွာရှာဖွေထောက်လှမ်းခြင်း အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ BPJS Health အနေဖြင့် Puskesmas (ပမဏာကျန်းမာရေးဌာန)များတွင် Pap smears နှင့် VIA နည်းစနစ်တို့ကို အသုံးပြုပြီး ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အင်းဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လူဉီးရေ၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ ကျန်းမာရေးအာမခံတွင် အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်မည့် လူမှုကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။
နောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှုအဆင့်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်သုံးခုတွင် ပြုလုပ်သွားပါမည်။ – အရှေ့ဂျာဗား၊ ဂျာဗားအလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်ဆူမတ်တြာတို့တွင် လေ့လာမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပြည်နယ်သုံးခုသည် ၎င်းတို့၏ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို အခြေခံ၍ မကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် သက်မှတ်ထားသည့် အဓိက ဦးစားပေးပြည်နယ် ၉ ခုထဲတွင် အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အသေးစိတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဂျာဗားပြည်နယ်အလယ်ပိုင်း၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၃၂,၈၀၁ ခန့်(သို့မဟုတ်) ဂျာဗားပြည်နယ် စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ ၂၈.၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ လူဉီးရေမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကောက်ယူခဲ့သည့် ကြားဖြတ်စစ်တမ်းအရ ၃၃.၈ သန်းခန့်ရှိသည်။
အရှေ့ဂျာဗား ပြည်နယ်၏ ဧရီယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၄၇၈,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာရှိသည်။ လူဉီးရေမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၃၈.၈ သန်းရှိပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဒုတိယလူဉီးရေအထူထပ်ဆုံး ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ဆူရဘရဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကာ အဓိက စက်မှုဇုန်များရှိရာနယ်မြေလည်းဖြစ်သည်။
မြောက်ဆူမတ်တြာကျွန်းမှာ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၇၂,၉၈၁ စတုရန်း ကီလိုမီတာရှိပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နေထိုင်သူလူဉီးရေ ၁၃.၉ သန်းခန့်ဖြင့် ဂျာဗားကျွန်းအပြင်ဘက်ရှိ လူဉီးရေအများဆုံး အင်ဒိုနီးရှားပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤအတောအတွင်း မျှော်မှန်းလေ့လာမှု/အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုအဆင့်ကို ပြည်နယ် ၂ ခုတွင်လေ့လာမှုများပြုလုပ်သွားပါမည်။ – အရှေ့ဂျာဗားနှင့် ဂျာဗားအလယ်ပိုင်းတို့တွင်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
အင်ဒိုနီးရှား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ထဲတွင် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအား အခြေခံအဆင့်တွင် လက်လှမ်းမီနိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့မှ ပေးသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုဟု ဆိုနိုင်သည်။ Puskesmas သို့မဟုတ် ပဏာမကျန်းမာရေးစင်တာများသည် အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လူတိုင်းလက်လှမ်းမီလွမ်းခြုံနိုင်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေ (သို့မဟုတ်) JKN အစီအစဉ်အရ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတဖြစ်လည်း ဆေးကုသမှုများအတွက် တံခါးစောင့်သဖွယ် အရေးကြီးလှပါသည်။ Puskemas သည် ပြည့်စုံသည့် မဖြစ်မနေဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ပေးပြီး ကုသရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် outreach programmes များမှ တဆင့် ပံ့ပိုးမှုများအတွင်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုများမြှင့်တင့်ရေး စသည့် တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။ Puskemas အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတွင် ပါဝင်သည့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးရေးနှင့် စောင့်ကြပ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် လူနာသယ်ပို့စနစ်၊ MCH နှင့် မိသားစုစီမံကိန်း၊ အာဟာရနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့် မိလ္လာစနစ် စသဖြင့် လိုအပ်ချက်ရှီသော နယ်ပယ်ခြောက်ခုတွင် အဓိကလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Puskemas အနေဖြင့် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများအတွက် ရပ်ရွာအခြေပြုအစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Posbindu မှ ရှေ့ဆက် ကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သူများရှိ၍ လွဲပြောင်းပေးမှုများကိုလည်း တာဝန်ခံကုသပေးသည်။
အဆိုပါအခြေခံ ဝန်ဆောင်မှုသုံးခုကို ဒေသခံများ၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အသေးစိတ်အစီစဉ်များ အဖြစ်ထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည်။ Puskesmas အနေဖြင့် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်(သို့မဟုတ်) အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှုမှာ မကြာခဏဆိုသလို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအပေါ်တွင်သာ မူတည်လျက်ရှိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် Puskesmas ( ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှု)ဌာန တစ်ခုလျှင် လူဉီးရေးသုံးသောင်းခန့်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရပြီး အရေအတွက်မှာ ကျေးလက်ဒေသများတွင် လျော့ကျနိုင်သည်။ ဂျာဗားကျွန်း အပြင်ဘက်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်းမီနိုင်သူမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် နည်းပါးသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုလွမ်းခြုံနိုင်သည့် ဧရိယာမှာ ပို၍ ကျယ်ပြန့်လာနိုင်ဖွယ်ရှိနေသည်။
ကျေးရွာအဆင့်တွင် Puskesmas အနေဖြင့် ကျေးရွာအခြေပြု ဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းထားသည့် လမ်းညွှန်တာဝန်များကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အင်းဒိုနီးရှားဘာသာဖြင့် Posbindu သို့မဟုတ် integrated development post of NCD ဟုအမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ Posbindu ၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အထက် တစ်ယောက်ချင်းစီကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါြဖစ်ပွားနိုင်ခြေများအား စောစီးစွာထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်တားဆီးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ရပ်ရွာလူထူပါဝင်လာမှုကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Posbindu သည် ရပ်ရွာအသိုင်းဝိုင်းထဲတွင် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါဖြစ် ပွားနိုင်ခြေအကြောင်းအရင်းများ တွေ့ရမှု ကို ရှောင်ကျဉ်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်မှုများပေးခြင်းနှင့် အခြားအားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသည့် လူများအတွက်လည်း လက်ရှိရှိနေသည့် ရောဂါြဖစ်ပွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများကို သတိပြုမိလာစေပြီး မကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အဆိုပါအကြောင်းအရင်းများ၏ ပြင်းထန်မှုကို လျှော့ချရန် အားထုတ်လုပ်ဆောင်သွားရန် Posbindu က ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ Posbindu ၏ Puskesmas သို့လမ်းညွှန်မှုစနစ်ကို အားကောင်းခိုင်မာလာစေပြီး ကာကွယ်တားဆီးရေး( နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးကဲ့သို့) နှင့် ကုသရေး နှစ်ခုစလုံးမှ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါခံစားနေရသည့် လူနာများ၏ ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်သွားရန်လည်း Posbindu ကရည်မှန်းထားပါသည်။
Posbindu ဝန်ဆောင်မှုများက ထိန်းချုပ်ထားသည့် မကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားရသည့် အသေးစိတ်အကြောင်းအရင်းများမှာ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ဆီးချို၊ ကင်ဆာ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါ၊ ဂေါက်ရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါ၊ အဝလွန်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ရောဂါနှင့် အခြားရောဂါများပါဝင်သည်။ Posbindu programmes အစီစဉ်များသည် အခြားရပ်ရွာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အိမ်ရာများတွင်လည်း ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားရှိ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကို Universitas Sebelas Maret (UNS) မှ ပံ့ပိုးပါသည်။ UNS မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းအားလုံးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ BPJS (လူမူအာမခံအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း) စသည့် မိတ်ဘက်များနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
World Health Organization, Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2018. Available at: https://www.who.int/nmh/countries/2018/idn_en.pdf?ua=1 [Accessed 16 Jun. 2019].
Mahendradhata Y, Trisnantoro L, Listyadewi S, Soewondo P, Marthias T, Harimurti P, Prawira J., The Republic of Indonesia Health System Review. Health Systems in Transition 2017; 7(1).
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan hasil riset Nasional 2018 (National report on research findings 2018)
Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (Population of Indonesia. Results of the 2015 Intercensal Population Survey). Available at https://bps.go.id/website/pdf_publikasi/Penduduk-Indonesia-hasil-SUPAS-2015_rev.pdf